ဆင်​ ဦးတိုက်​ ကြဦးမလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » ဆင်​ ဦးတိုက်​ ကြဦးမလား	15
ဆင်​ ဦးတိုက်​ ကြဦးမလား
Posted by naywoon ni on Mar 1, 2015 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 15 comments
ဆင်​ ဦးတိုက်​ကြဦးမလား ဘယ်​တုန်းကတည်းက အရိုးစွဲလာတဲ့ အယူသည်းမှုလဲ​တော့ မဆန်းစစ်​ချင်​​တော့ပါဘူး ။ အိမ်​၀င်းတံခါး​ပေါက်​ကို ဆင်​ဦးတိုက်​ရင်​ လာဘ်​​ကောင်းတယ်​ ။ ဆိုတဲ့ အယူသီးမှု ။ ခု​တော့ အဲ့ အယူသီးမှုကို အခွင့်​​ကောင်းယူပြီး အသုံးချလိုက်​တာက​တော့ သစ်​ဆွဲစရာ မရှိ​တော့တဲ့ ဆင်​ဦးစီး တစ်​​ယောက်​​ပေါ့ဗျာ ။ ​နေ၀န်းနီ ညည ရှစ်​နာရီ​လောက်​ စက်​ဘီး​လေးနဲ့ အိမ်​ပြန်​လာရင်​ ​တွေ့​တွေ့​နေရတာ နှစ်​ည သုံးညရှိပြီ ။ ​တွေ့ကာစ ညက​တော့ အမှုမဲ့ အမှတ်​မဲ့ ပါပဲ ။ ​အော်​ ……. ဆင်​အငှားရှိလို့ မြို့ထဲက​နေဖြတ်​ပို့တယ်​လို့ပဲ ထင်​မိတာ ။ ​နောက်​ညကျ​တော့လည်း အရင်​​နေ့က ​တွေ့ခဲ့တဲ့ လမ်းမဟုတ်​ပဲ ​နောက်​တစ်​လမ်းမှာ ။ အဲ့ ဆင်​နားမှာလဲ လူစုစု စုစုနဲ့ စကားတီးတိုး​ပြောလို့ ။ ကိုယ်​နဲ့ ဘာမှမပတ်​သက်​​တော့လည်း အမှတိမထင်​ပဲ ဖြတ်​လာခဲ့မိတယ်​ ။ ​ဟော အခုညကျ​တော့လည်း ပိုပြီး အတွင်းကျတဲ့ လမ်းက​လေးထဲမှာ ။ ဆင်​​ပေါ်မှာ ပုခက်​တင်​ထားပြီး အ​ပေါ်က ဆင်​ဦးစီး ​ပြောလိုက်​တဲ့ စကား​ကြောင့်​ ​နေ၀န်းနီ ပြုံးလိုက်​မိတယ်​ ။ သူ​ပြောလိုက်​တာက အနီးပတ်​၀န်းကျင်​က လူ​တွေကြား​အောင်​ ခပ်​ကျယ်​ကျယ်​ ​အော်​လိုက်​ကြတာပါ ။
” ဆင်​ဦးတိုက်​ကြဦးမလားဗျို့ ” တဲ့ ။ သူ​အော်​လိုက်​တာ သိပ်​စိတ်​၀င်​စားမှု မရှိကြပါဘူး ။ ​နေ၀န်းနီလည်း လမ်း​ပေါ် ကန့်​လန့်​ဖြတ်​ ဖြစ်​​နေတဲ့ ဆင်​​ကြောင့်​ စက်​ဘီး​ပေါ်က ဆင်းပြီး လမ်း​ဘေးက​နေတွန်းသွားလိုက်​ပါတယ်​ ။ (စပ်​စုချင်​တာကို​တော့ ထည့်​မ​ပြော​တော့ဘူး​နော်​ ) ခဏ ​နေမှ အိမ်​တစ်​အိမ်​ထဲက လှမ်း​မေးသံ ကြားလိုက်​ရပါတယ်​ ။
” ဘယ်​​လောက်​လဲ ” တဲ့
” နှစ်​​ထောင်​ပါ ”
တဲ့ ။ အဲ့​တော့ လှမ်း​မေးထဲသူက
” များတယ်​ကွာ ”
တစ်​ခွန်းထဲ​ပြောပြီး ​နောက်​ဆုတ်​သွားတယ်​ ။ ​ရောင်းသူ ၀ယ်​သူကလည်း အသံတူလိုက်​တာ ။ ​နေ၀န်းနီ​တွေ့ဖူးတာက ​ဈေးထဲမှာပါ ။ အလှူတစ်​ခုမှာ ​မောင်​ရှင်​​လောင်းလှည့်​​နေတဲ့ ဆင်​က လမ်း​ဘေး ဆိုင်​က​လေး​ရှေ့မှာ ကြံရိုးစုပ်​​နေတဲ့ က​လေးဆီက ကြံရိုး​တောင်းတာ ။ ကွမ်းယာဆိုင်​က ငှက်​​ပျောသီး​တောင်းတာ ။ ဆင်​​ ပေမဲ့ ဆိုင်​မှာချိတ်​ထားတဲ့ ငှက်​​ပျောသီး ဆွဲစားလို့ ရတာ ဆွဲမစားဘူး ။ သူ့နှာ​မောင်းနဲ့ ငှက်​​ပျောသီးကိုထိလိုက်​ သူ့သခင်​ ( ဆင်​​ပေါ်ပါလာတဲ့ ဆင်​ဦးစီးကို ) တို့လိုက်​လုပ်​​နေတာ ။ ကွမ်းယာဆိုင်​​ပေါ်က မိန်းမက သူ့ဆိုင်​ ဆင်​ဦးတိုက်​တယ်​ဟဲ့ လာဘ်​ ​ကောင်းတယ်​ ဆိုပြီး ငှက်​​ပျော်​သီး ​တွေဖြုတ်​​ပေး​တော့မှ သူ့အလုပ်​ အလှူ ဆက်​လှည့်​တာ ။ အဲ့​ဒိလို မျိုး ။ ​နေ၀န်းနီတို့ နိုင်​ငံမှာ ဖြစ်​ပျက်​​နေတာကို​ပြောတာပါ။ ဆင်​ဦးတိုက်​​တော့​ကော ဘာအလုပ်​မှ မရှိလို့ ထိုင်​​နေရ တဲ့ မိသားစု ဘယ်​က လာဘ်​ ၀င်​မှာပါလိမ့်​ ။ ပြုလုပ်​ထားတဲ့ ကံ ( အလုပ်​ ) မရှိဘဲ လာဘ်​လာဘ က ဘယ်​​နေရာဝင်​လာမှာပါလိမ့်​ ။ ထီမထိုးပဲ ထီ​ပေါက်​ချင်​​နေတဲ့ စိတ်​ကူးနဲ့ တူမ​နေဘူးလား ။ အယူသီးတယ်​ဆိုတာက တစ်​ကယ်​​တော့ ပညာနုံနဲ့ တဲ့ ပတ်​၀န်းကျင်​​တွေမှာ ​တောရွာ​တွေမှာ ပိုဆိုးပါတယ်​ ။ ပညာကမ​တောက်​တစ်​​ခေါက်​ ။ ဒီပညာကို အရင်းခံပြီး ထပ်​ဆင့်​ ဆင်​ခြင်​ တဲ့ အ​လေ့အထ က နဲပါး ။ ဘာသာတရား နဲ့ လည်း ပဲ့ပြင်​ဆုံးမတတ်​တဲ့သူ ဆုံးမ​ပေးမဲ့ ဆရာမရှိ ။ ​ဘာလုပ်​ရင်​ဘာဖြစ်​တတ်​တယ်​ ဆိုတဲ့ ​ခြောက်​လုံး လှန့်​လုံး​တွေနဲ့ နဘမ်းလုံးပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်း ။ တစ်​ခါတစ်​ခါ ငါ အာဖရိက​တောထဲ ​ရောက်​​နေသလား ထင်​​​ယောင်​ထင်​မှား ဖြစ်​​အောင်​ကို အယူသီးမှု သည်းထနာတာ​တွေ ​တွေ့​နေရတယ်​ ။ ​ပြောရရင်​ ကိုယ့်​​ပေါင်​ကိုလှန်​​ထောင်းသလိုပဲရှိမယ်​ ။ ပြင်​မှာ​တော့မပါ​။ ဆို​တော့ကာ ​နောင်​လာ​နောက်​သား​တွေတွက်​
” အမျိုးသား​ ပညာ​ရေး ဥပ​ဒေ ကို ၀ိုင်းဝန်းပြင်​ဆင်​ကြပါစို့လို့ တိုက်​တွန်းရင်း ……….,………………………..
​နေ၀န်းနီ About naywoon ni
ဦးကြောင်ကြီး says: ဦးနီဂို မြက်နှာမဲfoxပျံ နဲ့ ယခိုင်ကဇံမိ ဒို့ဂ ကျောင်းသားတွေကို အသုံးချ အမြတ်ထုပ်နေသတဲ့.. ရွာထဲ တအိန်တပ်စင်း လိုက်ပြောတာ နားနဲ့ စက်စက် ကြားဂဲ့ဒါ။။
မြစပဲရိုး says: ဥပဒေ ကို ထပြင်လိုက်တာ နဲ့ အားလုံးကောင်း သွားမှာ သေချာရင် ဆယ်ခါပြန် ထောက်ခံ ပါတယ် အဘနီ ရယ်။
ပညာရေးမှာ တကယ်တန်း ပြင်ရမှာက ဥပဒေထက် စိတ်ဓာတ် တွေ၊ တာဝန်ယူ/တာဝန်ခံ တတ်မှု တွေပါ။
ဖွဘုတ်ထဲ မယ် သာယာဝတီ က မြန်မာစာမေးခွန်းထဲ အောက်ပါ တပည့်ဝတ် များ အကြောင်း စာစီကုန်းပါ ဆိုလား။
ပေးထားတာက “ကျွေးမွေးမပျက်၊ ဆောင်ရွက်စီမံ၊ မွေခံထိုက်စေ” တဲ့။
မနေ့ကတော့ ဂျပန် မြန်မာ တက္ကသိုလ် လက်မှတ်ထိုး တာ နောက်ခံ က ယူနီဗာစီတီ အင်္ဂလိပ်လို စာလုံးပေါင်း မှားနေရော။
ဒါတွေ က ဥပဒေ နဲ့လဲ မဆိုင်ပါ။ သင်ရိုး နဲ့လဲ မဆိုင်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း များ ရဲ့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှု၊ အလုပ်ပေါ် စေတနာ မရှိမှု တို့လို့ ဘဲ မြင်ပါတယ်။
ဒါက ပညာရေး တစ်ခု တင်မက ဘဲ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အားလုံး မှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်းပါ။
ဒီလို ဟာ တွေ ကို ပြင်ဖို့ ကိုယ်ကျိုးကို ချန်ခဲ့ပြီး ပြည်သူအတွက် တကယ်လုပ်ပေးမဲ့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား ကောင်းကောင်း လိုနေတာပါ။
ဒါကို မှ အရင် ရအောင် မလုပ်ဘဲ သူ တစ်လူ ငါတမင်း ထင်ရာ ကြဲ နေတာက သူတို့ အကြိုက်ပါဘဲ။
မြန်မာ တွေဟာ “Follow the Leader” ဆိုတဲ့ ကစားနည်း မတတ်ကြတာ ဝမ်းနည်းစရာပါဘဲ။
kai says: စနစ်ကြောင့်မဟုတ်..စနစ်ကြောင့်မဟုတ်..
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဒါက ပညာရေး တစ်ခု တင်မက ဘဲ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အားလုံး မှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်းပါ။
ဆိုလို့ ယုံကြည်​ကိုးစား​လောက်​တဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​မ​ပေါ်​ပေါက်​တာကလည်း သူကြီး​ပြောတဲ့ ကျိမ်​စာများလား အရီးရယ်​ ။
ဥပ​ဒေ ​တွေက​တော့ ပြင်​ရမှာပဲ ။။ပြည်​သူ​တွေကို စည်းကမ်းလိုက်​နာ​အောင်​ စည်းကမ်း​ဘောင်​အတွင်း​နေတတ်​​အောင်​ ဥပ​ဒေ ​တွေနဲ့ပဲ​လေ့ကျင့်​ရ​တော့မှာ ။ အဲ့​တော့ အုပ်​ချုပ်​သူက ပြဌာန်းမဲ့ ဥပ​ဒေကို မကြိုက်​ဘူး ။ ဘာလို့လဲဆ်ု​တော့ သူပြဌာန်းတဲ့ ဥပ​ဒေကို သူကိုယ်​တိုင်​မလိုက်​နာလို့ ။ ပြည်​သူပြဌာန်းတဲ့ ဥပ​ဒေ ကသာ တစ်​ကဲ့ ဒီမိုက​ရေစီ ။ ပြည်​သူက ဒီဥပ​ဒေ ပြဌာန်းမယ်​ လိုက်​နာနိုင်​တဲ့ အစိုးရ လာခဲ့ ။ အဲ့သလို​ပြောလိုက်​လို့ ကျုပ်​ ကို ကွန်​မြူနစ်​ တံဆိပ်​ကပ်​အုံးမလား မသိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 280
Courage says: အတတ်ပညာ အပြင် အသိပညာပါ အားနည်းနေမှု (ဆင်ချင်တုံတရားအားနည်းမှု) ဟာ ပြသနာတစ်ရပ်ပါ။ ဥပဒေကို ပြင်ရုံနဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပျောင်းလဲဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပဲ။ တောင်းဆိုနေတဲ့ ၁၁ချက်ထဲမှာ အလယ်တန်းအထိ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားနိုင်ရေးဆိုတာကလွဲလို့ ကျန်အချက်တွေက ဥပဒေပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အထမြောက်အောင် လုပ်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါနဲ့စကားမစပ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဆင်တွေမှာ အရေပြားရောဂါများ ဖြစ်နေကျသလား?????? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: အသိမမှားရင်.. အဲဒီဆင်ဖြူတကောင်… (ငှားတတ်ရင်) တနှစ်ဒေါ်လာ ၅သိန်းလောက်ရှာပေးနိုင်သဗျ…။
လပ်စ်ဗေးဂတ်ပို့ပြီး.. ပြစားယုံပဲ..။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ.. ရှင်လောင်းလှည့်ခိုင်းယုံပဲ..။
အဲဒီဝင်ငွေနဲ့.. ကလေးစာသင်ကျောင်းအတွက်.. အင်္ဂလန်က.. မာစတာဘွဲ့ရဆရာတွေပြန်ငှားပေးပြီး.. မြန်မာပြည်မယ်.. စာသင်ခိုင်းနိုင်ရင်.. ဆင်ဖြူတော်ပါ.. တကယ့်ဆင်ဖြူတော်ဖြစ်မပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သတ္တ၀ါတစ်ကောင် ကျွေးတာတော့ ကောင်းပါဒယ် ဆြာနီရာ၊ မျောက်ပြဆန်တောင်းသလို သူတို့လဲ ဆင်ပြငွေတောင်းတာပေါ့၊ လုပ်စားပါစေ ဒီလောက်လေးတွေတော့…
ဟိုဟာဂျီးဒွေတောင် မသထာရေစာ အပင်းဆို့နေဂျသေးတာ..
padonmar says: အဘနီ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဗြဟ္မဏဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြောင့်ပေါ့ အဘနီရယ်။
kai says: ဘာမှမလုပ်.. ထိုင်တောင်းတာထက်တော့ အများကြီးသာပါသေးတယ်..။
အနည်းဆုံး.. ဆင်တကောင်နဲ့.. လူတယောက်အလုပ်လုပ်ရပြီးမှ.. ငွေရတာကိုး..။
မတော်..အဲဒီဆင်.. မုန်ယိုပြီး အိမ်တလုံးလောက်ဖျက်.. လူတွေသတ်မိရင်.. ဘယ်သူလျှော်မယ်မသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: အဲ.. ရပ်ကွက်ထဲက အိမ်တော်တော်များများမှာ..
အိမ်အဝင်ဝထိပ် ချိတ်ထားတဲ့ မှန်ဝိုင်းလေးတွေအကြောင်းကော…
အဘနီ ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ
Mr. MarGa says: ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပဒ် မရောက်အောင် နေမှာပေါ့ ဟယ်
Mike says: .အဲ့ဒါက လှည်းဦးတိုက်လှေဦးတိုက်နေရာမှာရှိနေတဲ့ အိမ်တွေမှာလုပ်ထားလေ့ရှိတယ်…အလက်ဆင်းရ
.အန္တရာယ်ကင်းဆိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ရှေးက.. လှည်းဖြစ်ဖြစ်.. လှေဖြစ်ဖြစ်.. ယဉ်ဖြစ်ဖြစ်.. အရှိန်နဲ့လာရင်.. မကွေ့မရှောင်နိုင်ပဲ.. တည့်တည့်ဝင်တိုးမှာမို့..လှည်းဦးတိုက်လှေဦးတိုက်နေရာ.. ကြက်လျှာစွန်းထောင့်…စတဲ့အ်ိမ်..နေရာတွေမှာ.. ရောင်ပြန်အလင်း.. ရောင်ပြန်ရုပ်နဲ့..လန့်အောင်.. သတိထားမိအောင်.. မှန်ထား..။ သစ်ပင်စိုက်ဆိုတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ကားအက်စိဒန့်..တခါ..၂ခါ..၃ခါလောက်.. တနှစ်မှာ.. တနေရာထဲပုံစံတူဖြစ်ပြီဆို… လမ်းကြော..ယဉ်ကြော..အင်ဂျင်နီယာက..လာတိုင်းတွက်ချက်.. ပြင်ပစ်တာပဲ..။
မှန်မထား..။ လက်တွေ့ကျကျဖြေရှင်း..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: ဟုတ်ပါ့ ။ ရပ်ကွက်ထဲမတော့ တချို့က…မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မလာနိုင်အောင်တဲ့..
လာခဲ့ရင်… မှန်ထဲ သူ့ပုံသူမြင်ပြီး…လန့်ပြေးအောင်တဲ့.. မှန်တွေ ချိတ်ထားတာပေါ့လေ…
တွေးမိတာက…မှန်ကြိုက်တဲ့ အလှကြိုက်သရဲဆို မှန်လေးဟ ဆိုပြီး..ရှေ့ပိုတိုးလာမှာလို့…
အကျည်းတန်မှန်ကြိုက်ဆိုတဲ့ ဗမာစကားပုံကလည်း ရှိသား မဟုတ်လား..ခွိ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အယူအဆ ဓလေ့ထုံးစံဆိုတာက ကိုယ့်နိုင်ငံမှာမှတော့မဟုတ် ကိုယ့်ထက်အယူသီးတဲ့နိုင်ငံတွေတောင်အများကြီးပါ။
လွန်ကဲတာတော့ ဘာမှမကောင်း။တစ်ချို့ကျတော့လည်း စိတ်ဖြေတဲ့သဘောပေါ့။
ကိုယ်တွေကတော့ ရိုးရာဓလေ့ ထုံးစံ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်မိ။